RGB မီးအိမ် RGB မီးအိမ် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
SHINYU LIGHT CO., LTD. ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ၏ကျယ်ပြန့်၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည် RGB မီးအိမ် in Taiwan။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ ISO ကိုအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုလက်မှတ်လွန်ပြီဝိညာဉ်တော် "ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်, ရုန်းကန်, ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ဆည်းကပ်မှု" ကိုလိုက်နာရန်, ထိုလူအပေါင်းတို့ထုတ်ကုန်လက်မှတ်ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာဝတ္ထုအဖြစ်ဖောက်သည်မှကျေနပ်အောင်ကြည့်ရှုပါညွှန်ကြားချက်ကိုအဖြစ်စျေးကွက်ထဲကိုတောင်းဆိုမှုတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်နှင့်အသစ်ထုတ်ကုန်တိုးတက်စေခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပထမဦးဆုံးအရည်အသွေး, ခရက်ဒစ်ရပ်လျက်က, စျေးကွက်ကိုအနိုင်ရသွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးကောင်း, ကောင်းမွန်သောခရက်ဒစ်, ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းစျေးနှုန်းအပြင်းအထန်တောင်းဆိုဖို့နှင့်စားသုံးသူနှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ မိတ်ဆွေများအားလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူမဆက်သွယ်လာမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
ပုံစံ - T2 LED RGB 56°/ 95° 60W-150W
ကျယ်ပြန့်သောမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပနေရာများတွင်ဆေးထိုးအပ်တံတားများ,အဆောက်အ ဦး များ,ပန်းခြံများ,ရင်ပြင်များ,အားကစားကွင်း,အားကစားကွင်း,ဥယျာဉ်များ,ဥယျာဉ်နိမိတ်လက္ခဏာ,အရောင်းပြခန်းများ,စျေးဝယ်စင်တာများ...ပြောင်းခြင်းအရောင်စီမံချက်.
ပေါင်းစည်းအထုပ် COB အလင်းအရင်းအမြစ်,ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် optical module ကိုကိုက်ညီ(ထောင့်:56/၉၅ ဒီဂရီ)နှင့်ရွေ့လျား bracket က.အလင်းပုံသဏ္theာန်အထိရောက်ဆုံးထိန်းချုပ်မှုနိုင်ပါတယ်.
စံ DMX512 protocol ကို.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/rgb-lamp.html
အကောင်းဆုံး RGB မီးအိမ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် RGB မီးအိမ် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ